The design is excellent artwork and it isabeautiful object crafted and forged byaMyanmar goldsmith.
One of the royal artifacts returned by the British in 1964. The Salver is ornamented in the middle with the nine noble gems and it hasaflat reed rim set with rubies to formadecoration of lotus petals.
မြန်မာ့ရွှေပန်းထိမ်ပညာ၏ အံ့မခန်းဘွယ်လက်ရာပြောင်မြောက်မှု ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၆၄-ခုနှစ်တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော နန်းတွင်းပစ္စည်းများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မုနောလင်ပန်းအလယ်တွင် န၀ရတ်ကိုးပါးနှင့်ပတ္တမြားကျောက်မျက်ရတနာစီခြယ်၍ တန်ဆာဆင် ထားသည်။
diameter: 59 cm.
Mandalay, Central Myanmar
9th Century - 19th Century
Serving food to the King.
Originally the salver was kept asaroyal artifact in Mandalay in the Mya Nan San Kyaw Palace. After annexation by the British, the royal artifacts were transferred to London. This salver was returned to the Union of Myanmar in 1964 from England and transferred to the National Museum in the same year.
ရွှေ၊ ပတ္တမြား၊ န၀ရတ်ကိုးပါး
အချင်း - ၅၉ စင်တီမီတာ
အေဒီ (၉-၁၉) ရာစု
မူလက မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်တွင်ထားရှိသည့် မင်းခမ်းတော်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက် မင်းခမ်းတော်ပစ္စည်းများကို အင်္ဂလိပ်တို့ကလန်ဒန်သို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၆၄-ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းနှစ်တွင် အမျိုးသားပြတိုက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခဲ့သည်။
National Museum of MyanmarAD 9th century ~ AD 19th century Decorative ArtGoldUnknownMandalay, Central Myanmar
Stone Vessel with Pyu Inscriptions
BCE 5th century ~ AD 1st century